NextMapping | Ny ho avin'ny asa sy ny herin'ny marika
Ny ho avin'ny asa sy ny herin'ny marika
Vao haingana aho dia nasaina zync podcast andian-teny miresaka momba ny ho avin'ny asa sy ny herin'ny marika.
Tao amin'ny podcast dia (niresaka ny momba an'i Zync izaho sy ny tenako) ny antony maha-zava-dehibe kokoa noho ny taloha ny fananana marika matanjaka.
Ity misy fandikana an'io podcast io - na mety mihaino azy eto ianao.
Brad: Salama daholo ary tongava soa eto amin'ity herinandro ity ny marika rehetra. Tena omem-pankasitrahana sy faly izahay fa manana talenta manokana izahay, Cheryl Cran, izy no manatona anay ho an'ny podcast anio amin'ny hoavin'ny asa sy ny marika.
Cheryl Cran dia hoavin'ny matihanina miasa ary mpanorina ny NextMapping.com izy no mpanoratra ny boky sivy anisan'izany ny andiany faharoa amin'ny "NextMapping - Antsoy, Hizaha ary hamorona ny ho avin'ny asa" ary atrikasa mpiara-miasa aminy ary tena niara-niasa tamin'ny Cheryl izahay tamin'ny anarana hoe NextMapping sy teo amin'ny toerana misy ny NextMapping. Izy dia koa ny laharam-pahamehana ho an'ny influencer an'ny asa ary mpanolo-tsaina mpandresy iraisam-pirenena. Nasongadina azy tao amin'ny Forbes, lahatsoratra Huffington, Metro, New York, CBS ary Bebe kokoa. Koa Cheryl, misaotra betsaka fa nanambana anay androany ary tena faly izahay miresaka amin'ny ho avy miaraka aminao.
Cheryl: Misaotra Brad. Faly aho fa eto.
Brad: Te hitsambikina amin'izany izahay satria manana fanontaniana maro ho anao ny ekipa ary tena te hahazo ny fomba fijerinao ianao momba ny zavatra hitranga amin'ny rehetra ny zava-drehetra. Noho izany dia tiantsika ny hanomboka amin'ny fanontanianao anao mifototra amin'ny fomba fandehan-javatra izao ary izay rehetra mahafinaritra ny fitadiavantsika ny lalana, ahoana no heverinao fa hiova ny tontolon'ny asa mandritra ny taona vitsivitsy?
Cheryl: Eny, voalohany indrindra, te-hiteny aho fa efa naminany ny 10 taona lasa izay fa 50% -n'ny mpiasa no mandeha miasa amin'ny taona 2020.
Tsy nanombatombana ny areti-mifindra tokoa isika satria iray amin'ireo antony nahatonga azy, saingy ny famantarana rehetra sy ny fikarohana rehetra natao tamin'ny fankatoavana modely dia nanondro ho hoavy automatique izay hahitantsika fiasa bebe kokoa, robotika bebe kokoa, teknolojia bebe kokoa fanavaozana, izay midika fa ny olona dia hibanjina hiasa lavitra. Talohan'ny ny areti-mifindra, fikambanana maro no nanomboka nanao hetsika mankany amin'ny kolontsainan'ny asa lavitra. Ankehitriny ny zava-mitranga dia ny fanalanana ny valalabemandry no nanery azy, ka ho hitantsika hoavy izay mitohy ho lasa lavitra hatrany mifantoka.
Ny ho hitantsika amin'izany dia ny fepetra takian'ny mpitarika hitarika tena tsy hitovy tamin'ny nalehany teo aloha. Hahita ekipa mitantana tena bebe kokoa izahay. Ho hitantsika ny fikambanan'ireo fikambanana mampiasa ny fomba fitarihana karazana Holacracy bebe kokoa sy ny karazan-tarika. Indray, ireto dia zavatra izay, nosoratako tao amin'ireo boky ary noresahintsika. Ny ho avin'ny asa dia ho mpiasa bebe kokoa izay notarihan'ny orinasa notarihin'ny orinasa. Ary hiato kely aho ary avelao avelao handeha hisokatra ihany izy io.
Brad: Ka rehefa miresaka momba ny fitarihana mpiasa ianao, inona no heverinao fa misy ireo singa hiova rehefa ny mpiasa no mitarika fa tsy ny vondron'orinasa?
Cheryl: Eny aloha, ho hitantsika ny fitomboan'ny toekarena goavambe. Ho hitantsika mpiasa bebe kokoa milaza hoe, fantatrao izay, tsy tena te-hiasa amin'ny orinasa iray aho. Te hanana traikefa amin'ny indostria maro aho. Noho izany dia handeha hiasa ho an'ny fikambanana maromaro aho amin'ny maha-mpandraharaha azy, amin'ny maha-freelancer anao, ary miasa amin'ny fomba izay manampy azy ireo hanorina ny fahalalany fa mampitombo ny safidiny amin'ny ho avy koa. Koa ny mpitarika nitarika dia midika fa na dia amin'ny toe-javatra misy antsika ankehitriny ary eny, fantatro tsara ny isan'ny tsy an'asa any Etazonia sy Canada amin'izao fotoana izao mandritra ny vanimpotoana, ary tsy misy na izany aza dia hitantsika fa mbola hisy ny tsy ampy mpiasa, rehefa miverina amin'ny fiainana mahazatra ny zavatra, ka tsy hiverenany hoe inona ilay izy. Handeha amin'ny vanim-potoana manaraka izany ary ho toy ny tontolo hafa tsy mitovy ny mahazatra manaraka izay haneken'ny mpiasa ny vola sy ny fomba tian'izy ireo hiasa.
Ny mpiasa dia mitaky ny hiasa lavitra amin'ny ampahany amin'ny famaritana asa. Ny mpiasa dia hanosika ny fomba tian'izy ireo hiasa ary ny fikambanana dia mbola mila mahita olona manan-talenta ary ny fikambanana tokony hahatratra ny fangatahan'ny mpiasa sy ny fomba tian'izy ireo miasa ary izany dia zava-misy vaovao vaovao izay nisy zatra nialoha an'io. Nefa ankehitriny tena mitady ny fomba hahasarika ny talenta tsara indrindra isika amin'ny fananana tontolo iainana mifantoka amin'ny tontolo mifantoka amin'ny orinasa mifantoka amin'ny orinasa.
Jeremy: Cheryl, inona no heverinao ho manan-danja ho an'ny fantatry ny marika sy ny tsena momba izany zava-misy vaovao izany?
Cheryl: Mieritreritra aho fa nampiova ny adihevitra amin'ny marika. Mieritreritra aho matetika hoe rehefa mijery ny marika mazava ho azy isika, ary miara-miasa aminao ry zalahy, fantatsika fa tena lalindalina ny fizotranao ary mijery ny zoro rehetra ianareo dia mijery ny fipoahan'ny olona, ​​ny fototry ny mpanjifanao ary ireo zavatra rehetra ireo. manao ahoana marina ianareo!
Mihevitra aho fa mila manana izany hafatra izany hanehoana ny lanjan'ny fikambanana ny marika ary asehoy amin'ny mpiasa fa fikambanana ny mpiasa. Ny marika dia mila milahatra amin'ny fihetsiky ny mpiasa vaovao. Ny marika dia mila manana politikam-pitantanana lavitra, fomban'ny mpiasa etika ary hampifanaraka ny fampanantenan'ny marika amin'ny traikefa ataon'ny mpiasa ankoatra ny traikefan'ny mpanjifa.
Brad: Ary ianao ve milaza fa Cheryl, mpiasa dia manantena ny tena zavatra marina sy manao ny marina ary mahitsy.
Cheryl: Eny, miaraka amin'ireo vaovao momba ny vaovao sandoka izay noteren'ny olona tamim-pitandremana antsika dia tena sarotiny amin'ny firaisankina sy ny tsy fivadihana, izay tonga amin'ny maha-izy azy. Ka izany no notadiaviny tao amin'ireo marika. Mikaroka ireo orinasa miaina ny marika izy ireo, satria ireo no marika, manolotra ilay marika. Amin'ny NextMapping iray amin'ireo zavatra tena niasa ho anay rehefa nomenay ny marika izany miaraka aminareo ry zareo dia ny zava-misy fa ny marika dia niray tanteraka taminay, izay nanampy ny olona hahatratra izay ho avy. Ka raha tsy asiana marika ilay marika dia tsy eo ny olona.
Tsy manam-potoana intsony ianao hahazoana fandresena ny olona, ​​tsy maintsy miakatra eo no ho eo ny marika ka tonga dia eo no ho eo ny fahazoan-dàlana ary hahazo avy hatrany ny tolo-kevitry ny sanda.
Gabi: Raha miresaka momba ny haavon'ny fandaminana, hanova ve ny fomba fiasantsika, hiova miaraka amin'ny ora maro, asa lavitra lavitra toa ny nolazainao na zavatra hafa?
Cheryl: Oh, eo daholo. Eny. Ny fanontaniako dia ny ampitson'ilay trano. Inona no dikan'ilay zava-misy taorian'ny lozisialy ho an'ny fananana orinasa? Eny, maro be ny fikambanana, pre pémodication, isika dia efa mijery ny karazana toeran-toeram-piasana lavitra. Fantatrao, inona ny isan-jaton'ny mpiasa miasa amin'ny birao? Ino ny isan-jato izay mety miasa? Ahoana no anaovantsika an'izany? Eny, mitaky politikam-pitantanana lavitra be, izay orinasa maro no mibanjina ankehitriny. Koa dia ho lasa ny asa, Mieritreritra bebe kokoa aho amin'ny la carte versus izay misy fomba iray ihany. Noho izany dia mino aho amin'ny ho avy fa ho te hiasa mandritra ny fotoana lavitra ianao na te hiasa any amin'ny birao 50% amin'ny fotoana lava, 50% amin'ny fotoana dia mety ho an'io karazana asa io ianao.
Ho hitantsika ny fanovana lehibe kokoa manodidina ny toetra sy ny fomba fiasa ary ny karazana asa mety indrindra amin'izy ireo. Ny anekdota mahaliana mandritra ny fotoana iainantsika amin'izao fotoana izao dia ny firoboroboana dia mivoatra mandritry ny aretin'ny tazo. Nahoana? Satria amin'ny ankapobeny dia miasa irery kokoa izy ireo. Ireo ny extroverts no miady mafy satria mitombo amin'ny olona iray ny hivezivezy amin'ny hetsika ao amin'ny biraon'ny birao, efa hitantsika, fantatrareo, ao anatin'izany, amin'ny karazana haingam-pandeha any aoriana, mahita ireo fikambanana mijery isika. nihena ny isan'ny olona ao amin'ny birao. Ary mino aho fa hitohy ny fironana. Mihevitra aho fa hahita vatana sy birao mafana kokoa isika ary bebe kokoa amin'ity elanelana lavitra ity miaraka amin'ny ekipa birao sy mihodina. Ary mino ihany koa aho fa ny fampiasana birao dia ho bebe kokoa amin'ny endrika, endrika WeWork. Tarika vondron'olona tonga manatrika tetikasa. Mbola hiasa izy ireo, fantatrao indray, afovoany lasa lavitra any amin'ny birao. Ary mahita ihany koa ireo birao, trano fivarotana tahaka ny Airbnb ho an'ny mponina. Ho hitantsika ny Airbnb ho an'ny orinasam-pifandraisana izay ahafahanao mampiasa habaka ankoatry ny fomba ampiasana azy ankehitriny. Noho izany fanovana be dia be sy haingana.
Christian: Niresaka momba ny fomba fitarihan'ny orinasa orinasa ianao. Manontany tena aho raha hanova ny fomba fihevitry ny fitondram-panjakana ny tenany?
Cheryl: Governemanta, mino aho fa mitovy amin'ilay mpiasa notarihan'ny mpiasa, hahita zotram-pitondrana olom-pirenena hitantana isika ary isika rehetra dia mankao. Ny tiako holazaina, any Kanada dia tena mahasambatra isika satria miaina demokrasia marina isika, fa hahita am-pitiavana kokoa amin'ny zavatra izay efa hitantsika miaraka amin'ny vola, miaraka amin'ny vola izay namatsy vola ho an'ny orinasa madinika sy ho an'ny fantatrao, ny, ny mpiasa mpiasan'ny fahasalamana, ny serivisy ilaina avy amin'ny fomba fiasa amin'ny fanjakana.
Satria ny governemanta indostria dia betsaka ny asa tokony hatao mandra-pahatongan'ny hoavin'ny asa.
Ary afaka miteny aho hoe, satria izy ireo dia mpanjifako ary naman'ny mpanjifako sasany.
Ary ny tiako holazaina dia maro amin'ireo indostria nentin-drazana toy ny fitantanam-bolan'ny fanjakana, fiantohana, tena hentitra ry zareo amin'ny fomba nanamboarany ny toeram-piasana izay efa niatrika fanamby izy ireo tamin'ny fampifanarahana ny zava-misy lavitra. , inona no tsy maintsy nitranga tato ho ato, nefa izy ireo koa manana olana amin'ny fisarihana sy fihazonana ny talenta na ny olona satria voafetra be ny fomba fiasanao ho azy ireo sy miaraka amin'izy ireo.
Ka efa nilaza aho nandritra ny taona maro, ny toerana roa izay tena hizaka marary indrindra fa ny mpampiasa dia ny fitondrana sy ny sendika. Ary ny anton'izany dia ny rafitra dia tsy azo ampifanarahana sy mifanaraka amin'ny toerana andehanantsika ho amin'ny hoavin'ny asa. Tsy midika akory izany fa tsy afaka ny hanavaozana ireo andrim-panjakana ianao, fa maro ny mpitarika izay tokony hatsangana mba hamongorana sy hahafahan'izy ireo hihaona amin'ity zava-misy lavitra ity, fa koa mahafeno ny zava-misy amin'ny asa mety, mifanaraka amin'ny zava-misy goavambe.
Brad: Ny zavatra henoko dia lazainao fa alohan'ny hoe, fantatrao, na orinasa na governemanta no nasoratra ho an'ny tokony hatao. Ny zava-misy ankehitriny dia ny olom-pirenena, ny vahoaka, ny mpiasa dia samy milaza amin'ireo governemanta na orinasa, ity no andrasantsika ary izao no tadiavintsika. Ary raha ny fomba fijery marika, miova ny herin'ny marika avy amin'ny, fantatrao, ireo governemanta sy mpampiasa dia miverina amin'ny vahoaka. Holazainao ve fa fitsaram-bahoaka izany?
Cheryl: Hoy aho hoe tena marina sy marina tsara. Tahaka ny orinasam-piasa miasa, ny fitondrana dia mizaka ny zom-pirenena na ny tiantsika hino, toy ny ohatra, any Canada eto dia te hino fa demokrasia isika ary tsara vintana fa manana fikarakarana ara-pahasalamana , fantatrao, izahay, isika, mahatsapa ny fomba niasan'ny firenena antsika nandritra ity areti-mifindra ity. Noho izany, tena tsara vintana ihany isika na dia toy ny mpampiasa fanjakana aza, raha tsy mifanaraka amin'ny marika mifaninana ny marinao. Ireo mpifaninana amin'ny governemanta izao dia i Amazon sy Google ary ireo orinasa mpitrandraka teknolojia rehetra ireo ary raha taona arivo taona aho dia mijery ny safidiko rehetra ary misy safidy maro ankehitriny na dia eo amin'ity pétraly ity aza isika, dia misy olona an-tapitrisany eran-tany efa voatonona ho 32 tapitrisa hatramin'izay taona 2030.
Mila mijery ny fomba hifaninana amin'ny Amazons, ny Googles, ireo fanombohana ao anatin'ny haingam-pandeha fa ao koa ny firafitra mba hahafahantsika manome ny serivisy ilaina.
Manjary mifantoka kokoa amin'ny vahoaka ny toeram-piasana ary mankamin'ny zavatra tadiavin'ny vahoaka sy mila ilana ny eritreritry ny eritreritra ara-barotra nentin-drazana tokony hataon'izy ireo.
Ny fanontaniana izay tokony apetraky ny governemanta dia momba ny zavatra ilain'ilay olona ary inona avy no vahaolana mety amin'izany?
Raha ny momba ny serivisy olom-pirenena no tsara indrindra natolotry ny olona iray, bot de chat, AI na robot? Izany no ho avin'ny fanontaniana vaovao momba ny asa. Inona no asa, inona no ilaina ary inona ny vahaolana tsara indrindra? Izay no mitondra fiara mankaiza.
Gabi: Inona ny anjara asan'ny fifandraisana sy fifaneraseran'ny olombelona ho lasa mpiasa, amin'ny maha-mpanjifa azy, amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny?
Cheryl: Misy tahotra matahotra ry zareo hijanona, tonga ny robots ary maka ny asan'ny olon-drehetra izy ireo fa tsy mila olona intsony. Tsy marina ny fikarohana hitanay. Raha ny marina, ny forum ara-toekarena eran-tany dia milaza fa ny olona no manan-danja kokoa noho ny taloha. Na izany aza, ny antony mahatonga izany fitantarana manodidina ny robots dia ho avy satria entin'ny tahotra ny haavon'ny fahaiza-manao, mifanaraka amin'ny zava-misy any aoriana. Ka ny zavatra anananao dia vondron'olona mila mahay ary efa mandrindra lahatra hahafahana mampiasa teknolojia hanatsarana ny serivisy omenay ny olona.
Ka tena misy olombelona mihoatra noho ny taloha mihitsy aza izany amin'ny hoavin'ny zanak'olombelona. Midika izany fa amin'ny alàlan'ny marika dia tsy maintsy jerena amin'ny alàlan'ny fahitana ny fomba anampian'izany fanampiana ny olombelona?
Tsy maintsy manontany isika, ahoana no fomba hanampian'ny olona izany?
Ny ho avy dia mikasika ny olona aloha miaraka amin'ny tombony. Mieritreritra aho raha misy na inona na inona, ity fanarenana ity no manery antsika rehetra handeha, eny, miandrasa faharoa, jereo ny fiantraikan'ny fiatoantsika rehetra eo amin'ny tontolo na ahoana ny fomba hananganana hoavy maharitra sy mampihatra ny marika antsika?
Ary hitanay ihany koa fa nahita olona misimisy kokoa momba ny olona amin'ny fiatrehana ny zava-misy iainany ny olona. Koa amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika mitarika olona be fangorahana kokoa amin'ny toe-javatra iainan'ny olona?
Ny automation sy ny ho avy robotized dia hanery antsika ho lasa olombelona tsara kokoa ary ilaina ny olombelona.
Ary ny fampandrosoana ny fahaizantsika dia mila manodidina ny zavatra roa.
Laharana voalohany, eny mila mampitombo ny fampifanarahana ny teknolojia isika.
Laharana faharoa, tokony ho olombelona tsara kokoa isika.
Tsy maintsy miakatra ny fiaraha-miory isika, voatery manana ny faharanitan-tsaina isika. Mila miakatra ny fahatakarantsika ny fomba fiasa ho ahy isika ary koa. Ary mieritreritra aho fa izany dia fotoana iray mahaliana amin'ny ho avy.
Brad: Mahaliana ny filazanao fa satria mieritreritra aho fa ny mpivarotra sy ny mpivarotra dia hiteny foana, marina, nihaino ny mpanjifa hatrany izahay ary ho marina izany dinihina izany ary nihaino azy ireo izy ireo. Saingy mieritreritra aho fa ny fomba tokony hihainoany dia mety ho tsy mitovy amin'ny hoavy. Ka alohan'ny toerana nihainoan'izy ireo ny fomba fividianan'ny olona na ny fividianany, dia heveriko fa ny fihainoana izao dia ny manosika azy ireo hividy na inona no manosika azy ireo handray anjara amin'ny marika na, na hisafidy marika. Ka io, io, dia toy ny hoe miditra ao ary hihaino amin'ny ambaratonga lalina kokoa. Niresaka momba ny maha-olombelona tsara kokoa ianao. Heveriko fa tokony ho mpivarotra sy mpivarotra tsaratsara kokoa ihany koa isika. Mila mihaino amin'ny fomba hafa isika. Tsy maintsy mihaino tsy misy antenainay isika, fantatrao, satria misy karazany roa tokony hihainoana. Afaka mihaino ianao ary miandry ilay olona hanaiky ireo zavatra rehetra efa eritreretinao. Na azonao atao ny miditra fotsiny amin'ny saina banga ary mihaino ary tena henoy izay lazain'ilay olona. Ary ataoko fa izany no fihodinana tokony hataontsika mba ho lasa mpivarotra sy mpivarotra tsaratsara kokoa ho olombelona.
Cheryl: Ao ny antsoiko hoe fihainoana eny ambony. Aiza ianao fa mihaino raha hijery raha ny fomba fijerinao dia ho voamarina ary avy eo misy fihainoana intuitive, ary mitaky fahalalahan-tsaina izay tsy misy fiheverana mialoha ary misy zavatra hafa manodidina ny hitadiavana ireo singa tsy mahagaga izay tsy hataon'ity olona ity, raha teny hafa, tsy dia fantatra ny momba azy ireo fa nobeazin'ireo manampahaizana mivarotra.
Efa niaina aho fa miaraka aminao sy ny ekipanao, tena mahay an'izany ianao. Ka toa ny famakiana ny ambany ambanin'ny haavon'ny tarehy ary afaka mamita ilay fampanantenan'ny marika amin'ny fanatanterahana ny fampanantenan'olombelona. Mino aho fa misy, misy ny fihainoana samihafa. Mihevitra aho fa efa miditra amin'ny vanim-potoanan'ny fihainoana intuitive lalina isika izay mifantoka amin'ny singa maha-zanak'olombelona eto, izay hihaonan'ny marika.
Jeremy: Ahoana no fahitanao ireo orinasa sy marika, ary marina fa mety hivoatra ny ho avy ny governemanta satria miaraka amin'ity fanitsiana fanampiny rehetra ity, ny tiako lazaina dia misy vidiny mifandraika amin'izany, sa tsy izany?
Cheryl: Mieritreritra aho fa ny zavatra ataontsika ao NextMapping, izay fanampiana ny mpitondra mba hanitatra ny fahafahany mitari-dalana. Tena mitaky eritreritra fisainana vaovao vaovao azo atomboka.
Noteren'ny pandemizoro dia ny fahatsapana fa tokony hahay hifanaraka isika rehetra dia hery fanakorontanana izay nahatonga ny orinasa handinika, izay tena mahaliana satria ny pandi-panafidiranao dia afaka manana andiana manam-pahaizana manokana toa ahy hitety ny hoe miteny ny lanitra. ary na dia handeha daholo aza, eny, eny, mbola ataontsika foana izay ataontsika?
Raha tokony ho izao kosa isika dia misy fanakorontanana tena misy eo amin'izao tontolo izao izay mahatsapa ny tsirairay amin'ireo zavatra maharary azy ireo.
Ka manana safidy roa ianao amin'izany fanovana sy fanelingelenana izany. Tsy azonao atao ny tsy miraharaha ny fanaintainana ary manohy tahaka ny nomanina toy ny nataonao teo alalàn'ny valan-javaboary mialoha ary izany. Ary izany safidy izany dia mety hitarika anao ho tsy misy ifandraisany amin'ny ho avy toy ny orinasa .B, tsy maintsy misokatra ianao amin'ny fahazoana na haka an-keriny satria ny olona iray mora mihetsika na vonona kokoa ny hampifanaraka fa ho mialoha ny lalao. ho valin'ny teboka fanaintainana taloha.
Hoy aho raha ny manam-pahaizana stratejika fa ho tsara ny tohan-kevitra, marina fa handany vola be izy io TSY AZONAO hanao izany fanovana izany.
Ary ataoko fa ny tohan-kevitra vaovao dia inona ny vidin'ny tsy fanovana sy ny angon-drakitra ary ny sy ny maha-ara-dalàna izany sy ny maha-izy azy, satria raha ny zavatra niainako, nisy mpitarika maro be dia be sy mitoetra ao amin'ny toerany manodidina ny ego.
Na dia manana traikefa mihoatra ny 20 taona ato anatin'ny ekipanay aza dia tsy misy aminay miaina ny zava-mitranga ankehitriny. Na izany aza, ny ananantsika dia ny fahamaotinana, ny fahafaha-milefitra sy ny fahavononantsika hametraka ny ego hitadiavana fomba hiarahana miasa sy hanampiana sanda.
Ny mandroso mpitarika dia ny fahavononana milaza, tsy fantatro, fa manana ekipa feno olon-kendry tena mahay isika ary miaraka hanokatra ny saintsika, handeha ho loharanom-bahoaka isika, manantona ny fahaizantsika mitarika isika mba hahafahantsika mora kokoa, mahay mandanjalanja izay ahafahantsika miditra ao, fa afaka mi-morph, afaka manantitrantitra ny zava-misy sy stratejika ny vidin'ny tsy fanaovana ny fanovana dia ny maha-mahefa azy antsika ao amin'ny hoavy.
Brad: Ny henoko dia ny hoe fantatry ny olona fa tsy afaka ny hangataka fotsiny amin'ny hafa fotsiny izy ireo fa tsy mahay mandefitra. Right?
Cheryl: Tsy misy fanontaniana. Ka ny zavatra iray tiako hazavaina dia ny tsy resahantsika rehefa miresaka momba ny toekarena hitarika mpiasa na orinasa hitarika orinasa isika, dia miresaka momba ny fandraisana andraikitra iraisana. Ka na iza na iza fa amin'ny maha mpiasa anao mba ho velona, ​​azo antoka fa tsy ho velona ianao miteny, tsara, izaho mihazona ny karatra rehetra, mr mpampiasa, ary izao ianao hanao izay rehetra lazaiko anao. Tsy izany ange no lazaiko. Ny tiako resahina dia misy ny fandraisana andraikitra miaraka. Ka ireo mpiasa izay vonona ny hiakatra sy hamaly vola nefa tsy miandry ny hanomezana azy ireo ny mpampiasa azy.
Fantatrao amin'ny teny hafa, izany hoe mpianatra izany mandritra ny androm-piainana ianao ka manao hoe: "Izaho dia handray an-tànana ny fahalalako sy ny fianarako mba hahafahako ho mora indrindra sy mora indrindra ary hanampy ny orinasa pivot".
Tokony hisy ny fandraisana andraikitra eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa.
Cheryl: Ireo mpanjifa sy mpiara-miasa efa niresahako niteny fa misy fifohazana mifoha izao mitranga ary ny ampahany amin'io antso mitoha io dia mitovy amin'ny taona 1980 raha 22% ny tahan'ny zanabola ary very trano ny olona.
Ary ny sivily rehefa nanana ady sy ny fiverenan'ny taona 2008 isika.
Ireo fanelingelenana ireo dia fifohazana ary antsoin'ny fanontaniana toy ny, inona no ilaiko hianarana? Ahoana no fomba hiarahako miasa? Ahoana no fomba hiara-miasa? Ahoana no fomba hahalalako bebe kokoa ny fahaizako? Ahoana no fomba hanampiako ny olon-kafa hahomby?
Ireo no fanontaniana napetraky ny isam-batan’olona, ​​raha manontany tena ny tenantsika isika dia hanana toeram-piasana maharitra mandritra ny androm-piainana na fiorenan-asa. Fa raha mipetraka ianao dia mandeha, fantatro tsara, dia ny fanjakana hikarakara ahy. Tsara izany mampilamina fotsiny. Tsy andraikitry ny andraikitrao amin'ny fananganana ny hoavinao izany.
Ny mamorona an'ity ho avy ity no tena eo an-tananantsika rehetra.
Noho izany dia mbola misy be dia be ny fotoana na dia mandalo fotoan-tsarotra henjana aza isika amin'ny tantara sy ny fotoan-tsarotra, somary hafa noho ny fotoan-tsarotra hafa hatrizay niainantsika taloha, saingy mbola mila mihady lalina hatrany isika ireo mitovy faritra iainantsika taloha mba hahatongavana amin'izany. Saingy ny mivoaka avy amin'izany, ny fahafaha-mivelatra sy tsy ho velona fotsiny dia ho lasa fanalahidin'ny olona izay manao tsara amin'ity andiany manaraka ity. Ary, mieritreritra aho fa tena mahery rehefa mampifangaro ny zavatra rehetra lazainao momba ny ho avin'ny asa miaraka amin'ireo tokony hataon'ny mpivarotra sy mpivarotra mba hanohanana izany rehetra izany.
Brad: Marina izany. Tsy maintsy ampitovina ny fandefasana hafatra. Tsy maintsy ampitovina ny toerana misy azy. Tsy afaka manana ireto olona rehetra miasa ireto ianao na miaina eo ambanin'ny governemanta. Ary mijanona ho mitovy foana ny varotra sy ny marika. Toy ny taloha izy. Ka tena mampanahy antsika rehetra ny mijery ny zava-drehetra amin'ny ankapobeny sy ny fahatakarana fa raha te-hiroborobo sy mba hanao ireo zavatra ireo isika dia mila manao ireo zavatra telo nolazainao. Mila manana mpitarika tsara kokoa isika. Isika izay mpitarika, dia tokony ho mpitarika tsara kokoa ary tokony hiandrasa bebe kokoa amin'ny mpitondra isika raha toa ka tsy eo amin'ny toeran'ny mpitarika isika dia mila mpivarotra sy mpivarotra tsaratsara kokoa ary tsara kokoa amin'ny asantsika ary vonona kokoa ho tompon'andraikitra ary manantena ny fandraisana andraikitra koa. Ary avy eo, araka ny hevitrao, tsy maintsy ho olona tsara kokoa isika.
Mila olona tsara kokoa fotsiny isika. Ary mino aho fa izany no farany hidina. Ary izao no azonao alaina amin'izany rehetra izany. Cheryl, misaotra betsaka. Fantatrao, izahay, tena faly izahay eto aminao eto. Faly er to izahay miresaka momba ny ho avin'ny asa sy ny ho avin'ny marika ary hiarahana miaraka amin'ireo zavatra roa ireo. Dia misaotra anao tonga soa izahay. Tena mankasitraka azy isika. Misaotra anao. Noho izany, marika ny zava-drehetra amin'ity herinandro ity.
Mifantena azafadyKanadaEtazoniaAfghanistanAlbaniaAlzeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAntigua sy BarbudaArzantinaArmeniaAostraliaAotrisyAzerbaijanBahamasyBahrainBangladesyBarbadosBelarosiaBelzikaBelizeBeninBermudesBhutanBoliviaBosnia sy HerzegovinaBotsoanaBrezilaBroneyBolgariaBorkina FasoBurundiKambodzaKameronaCape VerdeCayman IslandsRepoblikan'i Afrika AfovoanyTchadShilyShinaKolombiaComoresCongo, Repoblika Demokratikan'iCongo, RepoblikaCosta RicaCôte d'IvoireKroasiaKiobàCuraçaoSipraRepoblika TchekyDanemarkDjiboutiDominicaRepoblika DominikaninaTimor atsinananaEkoateraEjiptaEl SalvadorGinea GineaEritreaEstoniaEthiopiaFaroe IslandsFidjiFailandyFrantsaPôlinezia frantsayGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGresyGroenlandyGrenadyGuamGuatemalaGineaGuinée-BissauGoianaHaitiHondurasHong KongHongriaIslandyIndiaIndoneziaIranIrakIrlandyIsiraelyItaliaJamaikaJapanaJordaniaKazakhstanaKenyaKiribatiKorea AvaratraKorea AtsimoKosovoKoetyKyrgyzstanLaosLetoniaLibanonaLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLitoaniaLuxembourgMakedoniaMadagasikaraMalawiMaleziaMaldivesMaliMaltaNosy MarshallMaoritaniaMaorisyMeksikaMikrôneziaMoldaviaMonacoMongoliaMontenegroMaraokaMozambikaMyanmarNamibiaNauruNepalPays-BasNovely zelandyNicaraguaNigerNizeriaNorthern Mariana IslandsNorvezyOmanPakistanPalauPalestina, State nyPanamaPapouasie-Nouvelle-GuinéeParaguayPeròFilipinaPoloninaPortiogalyPuerto RicoQatarRomaniaRosiaRwandaSaint Kitts sy NevisSaint LuciaSaint Vincent sy ny GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome sy PrincipeArabia SaoditaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaNosy SalomonSomaliaAfrika AtsimoEspainaSri LankaSodànaSudan, AtsimoSurinameSoazilandySoedaSoisaSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad sy TobagoToniziavorontsilozaTurkmenistanTuvaluOgandaUkraineEmirà Arabo Mitambatrafanjakana mitambatraUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezoelai VietnamVirgin Islands, BritanikaVirgin Islands, USYemenZambiaZimbaboe